jeudi, 10 août 2017 12:02
Tily Madagasikara: Nametraka fahatsiarovana tsara teny amin'ny Bord de la mer
Fanadiovana ny Bord de la mer no namaranana ny "Tendro" tamin'ity taona 2017 ity izay notanterahina taty Mahajanga.
Skoto maherin'ny 800 no niara-nirona nanadio ny Bord, namafa sy nanasa izany. Ny mpamonjy voina avy amin'ny Kaominina renivohitr'i Mahajanga no nanondraka rano ary fanampiana avy amina orinasa tsy miankina ny ranon-tsavony nampiasaina.
Voasasa avokoa hatramin'ireo seza sy vato fipetrapetrahana manamorona ny ranomasina. Manomboka eny amin'ny manoloana ny lapan'ny Faritra hatreny anoloan'ny APMF.
Tsy izany ihany fa nametrahana takelaka fanentanana amin'ny tsy tokony hanaovana maloto eny an-toerana ihany koa ireto ankizy sy tanora beazina amin'ny Skoto ireto.
Carnage d’Iavoloha: Un crime impuni !
10 août 1991-10 août 2017, il y a 26 ans, des centaines de Malagasy ont péri dans un bain de sang, lors d’une Marche de la liberté organisée par la Force Vive Rasalama fortement réprimée par la garde présidentielle.
Ce crime reste impuni, aucune commémoration officielle n'est même pas organisée par le gouvernement en place ce jour à la mémoire des victimes innocentes.
Recrutement à la Jirama: Le Conseil d’Etat se déclare incompétent
Le Conseil d’Etat se déclare incompétent pour trancher la requête de l’intersyndical demandant le sursis à exécution et l’annulation de l’appel à candidatures lancé par la Direction générale pour occuper des postes clés au sein de la Jirama.
jeudi, 10 août 2017 10:57
HJRA Anosy: Herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny
Nankalazaina omaly alarobia 09 aogositra teto amin’ny HJRA Anosy ny fankalazana ny herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny 2017 izay efa natomboka tany amin’ny faritra samihafa.
Natomboka omaly teto Antananarivo izany ka tsy hiafara raha tsy amin’ny 11 aogositra 2017.
Ny lohahevitra tamin’izany moa dia ny hoe "Isika rehetra no manohina miaro ary mampiroborobo ny fampinonoan-dreny".
Nisy araka izany ny fanolorana takelam-pahatsiarovana sy marim-pakasitrahana ho an'ireo Reny mendrika.
jeudi, 10 août 2017 10:26
Finoana Katolika: Namoy Relijiozy roa
Notanterahina omaly alarobia 09 aogositra any Fandàna amin'ny lalan'Ihosy ny fandevenana an'i Frère FAZIO araky ny safidiny.
Miondrika eo anatrehan'ny fahalasan'i Masera Maria-Messina, izay nitondra ny fikambanan-drelijiozy Fo Masin'i Jesoa eto Madagasikara, kosa ny EKAR eto Fianarantsoa nanomboka ny alatsinainy teo.
92 taona izy izao nodimandry izao. Tamin'ny taona 1961 izy no tonga teto amin'ny Nosy ka tao Imady – Ambositra no nitobiany voalohany, vao nanitatra ny fikambanana nentiny avy any Raguse Italia.
66 Taona no naha-relijiozy an'i Raneny araky ny fiantson'ny rehetra azy.
Hotanterahina anio alakamisy 10 aogositra ny lamesa fanaovam-beloma azy farany ka hametrahana ny nofo mangatsikany eny amin'ny Fonenan'ny Masera Obla de Marie eny Mahamanina Fianarantsoa.
Fitaterana: Mivoaka ny laharana ME eto Mahajanga
Efa nivoka ny laharam-piara ME eto Mahajanga. Ny kodiaran-droa sy ny Bajaj no tena betsaka nahazo io laharana vaovao io nanomboka ny 12 jolay 2017 nirosoan’ny sampam-draharaha misahana ny fitaterana tamin'ny fizarana ny laharana vaovao.
jeudi, 10 août 2017 08:45
Fianarantsoa: Toeram-pizahantany niova endrika
Raha atao ny kajikajy dia mijanona roa andro eto Fianarantsoa ny vahiny mpizahatany raha ela indrindra. Toerana roa no matetika lalovan'izy ireo ka isan'izany ny Tanàna Ambony.
Manana sata avo eo amin'ny sokajy atolotra eo amin'ny fizahantany ity toerana ity, ary efa an-dalana ny hanaovana azy ho Vako-pirenena, saingy simba ilay lalana rarivato izay ivezivezena an-jato taonany maro.
Nanatanteraka asa fampidirana-drano hatrao Kianjasoa ny orinasa Jirama volana vitsivitsy izay, saingy tsy tafaverina amin'ny laoniny io rarivato nalaza hoe : mateza io.
Ankehitriny dia maro ireo mpivahiny no manontany ny momba io lalana io. Ny mponina kosa dia tsy mitsahatra ny manao fanairana amin'ny haino amanjery fa mbola tsy tody amin'ny fanarenana io fahasimbana io ny fitakiana.
Ny fantatra hatreto dia nanaovana "Appel d'offre" ny asa famerenana azy amin'ny endriny teo aloha. Miandry ny vokatr'izany ny rehetra hatramin'izao !